Somaliland.Org » Deked Baan Qodayaa?Tolow Yuu Dagayaa?
October 27th, 2009 Comments Off DALJIRE
Dubbe:Horta anigu laba Faysalba waan jecelay siday u hadlaan. Alla nimanku hadli okaa oo isu hadal ekaa.
Doolaal:oo waa kuwee labadaa Faysal anagu mid uun baanu naqaanayaye?
Dubbe:Dee waa Eng. Faysal oo Ina Cali Waraabe ku magac dheer iyo Sheekh Faysal oo Aadan Siiro ku magac dheer.
Doolaal:Allah hayaay! Bal kan gudcurka gudaya eega. Waar dee sheekha magaciisa dhabta ah ayaa Aadan la yidhaahdaa, Siirona waa lagu naanaysaa ee Faysal lama yidhaa. Kaasaanu wax ka dhegeysanaa oo aanu qof miyir qaba u haysanaa.
Dubbe:Wallah? Oo haddaa ma ilma abti baa? Isu hadal ekaa dee. Yeelkadoodee Ilaahay labadaba khayr badan ha siiyee Komishankii ka warran?
Doolaal:Adigu ka warran dee adigaa suxufi sheegan jiraye.
Dubbe:Anigu nin ayuumbaan ka yar shakisanahay. Inta kale waa ooraydh(alright) ninka biyoolaha ahaa ee biyaha mooye saxa ah iibin jiray. Ninkaa wuxuun baa i leh waa musuqmaasuq. Tolow mise Allah qabay shaydaan baa dhegta wax ii saaraya? Acuudu billaahi mina shaydaan. Istaaqfurulaah. Ilaahow Cadami oo kale nooga dhig.
Doolaal:Oo kuwa kale miyaad wada taqaan?
Dubbe:maya. Laakiin xisaab baan isu geygeeyay. Horta qolada Ina Rayaale soo magacaabay ama ku qaldamay kaad doontoba dhehoo (waayo rag xun buu moodayay)Ciise Xamare waan garanayaa kama baqe qabo inuu caddaalad ku shaqayn doono. Ninka madaw ee madaw sugulka ah ee bil amaara shaarubaha xiiraa ee Geelle ku magaca dheerina weligiiba ha na caayo oo ha na aflagaadeeyee nin mujaahida ayuu ahaa oo qalbigaa qoyan markay caddaalad timaado ayaan is leeyahay. Mujaahidiinta kama quusto xataa markay Talabiib ka degaan.(UDUB noqdaan)Ninka Samarroon wuxuun baan is idhi sidii saddexdii Samarroon ee ka horreeyay ayuumbuu nin sharaf leh oo caddaaladda garanaya noqon doonaa. Waanan ugu ducaynayaa inuu dadka dhex noqdo oo damiir yeesho. Labada mucaaradka ninka Kulmiye waa garanayaa caddaalad darro uga biqi mayo. ninka UCID waxaan ka filayaa inuu magaca xisbigiisa ee caddaaladda ku shaqayn doono. Waxa hadhay Dixood. Qalbi wanaag iyo samir baan ku hubaa oo uu halkaa ku soo gaadhay. Caddaaladna inuu ka tegayo u fili mayo nin qalbi wanaagsani.
Kulligood waxaan leeyahay dadka dhex u noqda. Kiishka xun ee Ina Rayaale qiyaastii lacagta ku soo rido ee uu xoghaynta idiinku soo dhiibi doonana diida. Ilaahaybaa lacag badane.
Doolaal:Waar hadalka ducada uun ku dhaaf oo dheeraadka ka daa.
Dubbe:Ku dhaafaye aan wax idiin sheego. Maanta saw dhawr askari oo yaryar intaan waddada ka sii qaaday maqaaxi meeshaasa anagoo ku shaahaynayna dad meesha fadhiyay khudbad umaan qaban.
Doolaal:Oo dadka lacagtooda ku istareexaya ee shaahaynayaana malaa kaa amaan heli maayaan?
Dubbe:Horta wuxuunbaan is idhi waar bal waxan ina Rayaale akhriyo ku akhri dadkan bal inay rum